Somaliland: Bulshada Oo Markii Ay Waayeen Aragtida Madaxweynaha, Iyagu Falanqaynaya Shirka London - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Bulshada Oo Markii Ay Waayeen Aragtida Madaxweynaha, Iyagu Falanqaynaya Shirka London
Somaliland: Bulshada Oo Markii Ay Waayeen Aragtida Madaxweynaha, Iyagu Falanqaynaya Shirka London
Dawladda Ingiriiska ayaa dhawaan sheegtay inay Somaliland ka reebtay shir dhaqaale loogu ururinayo Somalida oo bisha May lagu qabanayo magaalada London ee dalkaas.
Shirkan ayaa waxa ka horeeyay shir ay Somaliland sannadkii 2012 ka qayb gashay oo lagu qabtay magaalada London kaas oo ah kii lagu bilaabay wada hadalada Somaliland iyo Somaliya. Laakiin Ingiriiska ayaa sheegay inuu shirkan ka reebay Somaliland, waxaanay ka reebitaanka Somaliland ku tilmaameen fursad ay Somaliland dayacday ka dib markii ay dib u dhigtay doorashooyinka islamarkaana madaxweynaha loo sameeyay muddo kordhin.
Ingiriisku wuxuu sheegay in shirkani Somaliland u ahaa fursad ay ugu yaraan aragtideeda iyo mawqifkeeda ugu bandhigi lahayd beesha caalamka. Laakiin weli wax war ah lagama hayo Somaliland. Madaxweyne Siilaanyo oo ah hoggaamiyaha qarankan ah ayaan xataa weli kelmad ka odhan shirkaas oo ay dawladaha dunidu ka qayb galayaan.
Sidaas daraadeed, shacabka Somaliland waxay bixinayaan aragtiyo kala duwan markii ay waayeen mawqif dawladeed oo ay tixraacaan. Dadka qaar ayaa aaminsan in ka maqnaanshaha Somaliland ee shirkani u yahay faa’iido, shirkuna noqon doono mid gaar u ah Somaliya.
Dad kale ayaa iyaguna aaminsan in shirkan oo aan Somaliland lagu soo casuumin uu Somaliland ku yahay dhirbaaxo
diblomaasiyadeed, waxaanay dadkani qabaan in Somaliland halkaas ku soo bandhigi lahayd dood iyo aragtida ay qabto ee siyaasadeed iyo dhaqaale. Waxaana bedelkeeda madasha aragtideeda ku camiraysa dawladda Somaliya.
Haddaba, marka meel la iska dhigo aragtiyaha shacabka iyo weliba doodda dawladda Ingiriiska, waxa la tabayaa hoggaamintii Madaxweyne Siilaanyo oo ay waajib ku tahay inuu shacabka la hadlo oo uu u sharaxo shirkaas, kana jawaabo su’aalaha ay shacabku qabaan.
Madaxweyne, shacabku waxay sugayaan aragtidaada hoggaamineed ee shirkaas, maanta oo kalena maaha maalintii aad aamus afka xidhan lahayd.
War Deg Deg Ah: Madaxweyne Biixi Oo Safar Deg Deg Ah Ugu Bixi Doona Gobalada Bariga Somaliland + Ujeedada Socdaalkiisa
Somaliland: Wasaaradda Arrimaha Dibedda Oo Hargeysa Ku Qabatay Kulan Lagaga Hadlay Sidii Internet-ka Looga Difaaci Lahaa Qadiyadda Somaliland
Puntland: Alshabaab oo meelo hor leh ka qabsadey Gobalka Nugaal.